Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Duulimaadka koowaad ee F-16 Fighter Sare ee gardarrada hadda waa la dhammaystiray
Top Aces Corp. ayaa maanta ku dhawaaqday duulimaadka tijaabada ah ee guusha leh ee F-16 Advanced Aggressor Fighter (F-16 AAF) oo ku qalabaysan Nidaamkeeda Advanced Aggressor Mission System (AAMS). Farsamadan casriga ah waxay awood u siinaysaa diyaarada Top Aces in ay ku celceliyaan awoodaha ugu horumarsan ee ka soo horjeeda hawada-ilaa-hawo ee casriga ah. Marka la dhammeeyo duulimaadkii ugu horreeyay, F-16 AAF waxay hadda fulin doontaa taxane ah hawlo imtixaan hawleed adag oo loogu diyaar garoobayo gelitaanka adeegga Ciidanka Cirka ee Mareykanka.
Ku shaqaynta qaabdhismeed nadaam furan, AAMS waxa ay ogolanaysaa is dhexgalka degdega ah ee dareemayaasha iyo hawlaha uu macmiilku rabo in uu isticmaalo si uu u horumariyo diyaargarowga dagaalka hawada. Tusaale ahaan, maanta nidaamka waxaa lagu dhejiyay:
• Raadaarka hawada-ilaa-hawo ah (AESA) ee firfircoon ee elegtarooniga ah ee la baaray;
Nidaamka Cueing-Mounted Koofiyadaha (HMCS);
Xiriirinta xogta taatikada ah ee ka dhexeysa diyaaradaha iyo hay'adaha kale;
• Nidaamyada Raadinta iyo Raadinta Infrared (IRST);
• Jilidda Hubka Fidelnimada Sare ee u oggolaanaya ku-noqoshada saxda ah ee xeeladaha lidka ku ah;
• Shaqaalaysiinta Weerarka Elektarooniga ah ee Sare iyo awoodaha ogaanshaha RF dadban; iyo
• Shaqooyin farsamo oo kala duwan oo isku dubaridinaya nidaamyada kor ku xusan si ay u bixiyaan tiro saamayn cadaw ah oo macquul ah.
AAMS waxay ka dhigan tahay afar sano oo cilmi baaris iyo shaqo horumarineed ah oo ay sameeyeen injineerada Top Aces iyo la-hawlgalayaasha tignoolajiyada Adeegyada Farsamada ee Wadajirka ah, Inc. (CTI) ee Lexington Park, MD. Sannadkii hore, AAMS waxa loo shahaadeeyay isticmaalka Top Aces 'flat of A-4N Skyhawks oo hadda waxay la shaqaynaysaa Ciidamada Jarmalka iyo macaamiisha kale ee Yurub tababarka sare ee hawada. Hadda nidaamkan isku midka ah ee hawlgalka federaalka ayaa lagu rakibay Top Aces 'F-16A diyaaradaha M7 Aerospace ee San Antonio, TX, oo ah shirkad Elbit Systems of America ah oo khibrad u leh Dayactirka, Dayactirka iyo Dib-u-hagaajinta (MRO).
Top Aces waxa ay qorshaynaysaa in ay cusboonaysiiso inta badan guutaheeda F-16 teknoolajiyada AAMS ee dhulka jabisa sanadka soo socda gudahiisa.
"Markaad isku darayso awoodda iyo avionics ee F-16 iyo AAMS, waxay bixisaa xalka ugu macquulsan iyo kharashka-wax ku ool ah tababarka diyaar u ah duuliyayaasha duulaya dagaalyahannada jiilka shanaad, sida F-22 ama F-35", ayaa yidhi. Russ Quinn, Madaxweyne, Top Aces Corp., 26-sano jir ah mujaahid USAF ah iyo duuliyihii hore ee Gardarrada oo leh in ka badan 3,300 F-16 saacadood.
"Sababtoo ah dabeecadda fur-iyo-ciyaarta ee AAMS-yadayada, waxay sidoo kale u oggolaanaysaa in lagu daro dareemayaasha cusub iyo kuwa soo baxaya si wanaagsan mustaqbalka, taas oo bixisa dabacsanaan si loo cusboonaysiiyo F-16-yada iyo daboolo baahiyaha Ciidanka Cirka muddo sanado ah. inuu yimaado,” ayuu raaciyay Mr. Quinn.
Daawaynta Cusub ee Ba'an ee Madax xanuunka
In ka badan 30,000 oo qol oo hoteel ah ayaa laga dhisayaa gudaha...
Suuqa Microbiology-ga Warshadaha 4.95% CAGR inta u dhaxaysa...
Kiisaska COVID ee New Zealand ayaa kor u kacay laakiin xuduudaha furay
Diyaaradda Spirit Airlines waxay dib u eegis ku samaynaysaa hindise aan la rabin...
Suuqa Sirens: Falanqaynta Warshadaha Caalamiga ah iyo...
Dalxiiska Giriigga iyo Talyaaniga iskaashi guuleysi cusub
Runtii Tani Ma Dhammaatay Waajibaadka Maaskarada?
Xog cusub oo ku saabsan daawaynta cudurka Alzheimers